सरकार हामीलाई कोरियाबाट स्वदेश फर्काईदे,हामी तलाई बिषादी रहित ताजा तरकारी खुवाउछौ: – Kantipur Press
कोरियामा निन्द्रा आउदैन त्यसैले सपना देखिने कुरा आएन। सपना देख्नको लागि निन्द्रा आउनु पर्छ। जो नेपालमानै छुट्यो। सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकाले परदेशका कथा भनौं या व्यथा अन्य सबै समाचार भन्दा बढी नबनाएको हैनन्।तर सुन्ने कस्ले ? के नेपालमा सरकार छर? छ होला,तर जनताप्रती उत्तरदायी छर? उत्तरदायी पनि होला,के नागरिकका समस्या चिनेको छ?
केहिवर्ष यता कोरियामा घटेका अनेक घटनाको साँच्चि बनेको म।म भित्र पनि डर,पिडा,त्रास र देशको माया छँ। तिनवर्ष यता दर्जन भन्दा धेरै साथीहरू बाकसमा फर्किए,फर्किए के भन्नु फर्काइए,फर्काउनु पर्यो बाध्यता बस्। मिल्ने भए केबल एकचोटि मात्रै ति मित्रहरूलाई आफ्नै माटोमा देह त्याग्नु भनेर पेलेन भाडा दिएर पठाउन मन थियो। अबसोच सोच कहाँ पुरा हुन्छ। मन त त्यती मात्रै हैन,यो त बाध्यता बस् बोलिएको शब्द हो। संगै अंगाली मारेर फर्किने रहर,रहर मात्रै रह्यो। आफ्नै भुमिमा फेल्फी हान्ने कल्पना अकल्पनीय भयो।
केही महिना अघि एकजना साथिलाई मानसिक असन्तुलनको दर्द देखाउदै सकुशल देशको माटो टेकाउन पाइयो। हामीलाई यसमा सन्तोष मिल्यो। भनिन्छ नि मर्नु भन्दा बौलाहा हुनु बेस् । त्यसमानै हो,हाम्रो खुसी अन्यथा करोडौं का सपना, अमुल्य जीवन र अनमोल समय कसरी लेखाजोखा गर्दै खुशी हुन सकिन्छ? दुईवर्ष अगाडि घरबाट आएको केही महिना पछि एकजनाको दुर्घटना बाट ज्यान गयो। नेपाल एम्बेस्सीको पहलमा सब घर पुग्यो। हामी त्यो बेलापनि खुसीनै हुनुपर्यो। कमसेकम लास भए पनि त घर पुग्यो। सास यस्तै रहेछ मौरीले घारो छोडे जस्तो कतिबेला छाड्छ केही पत्तो नहुने। तर फेरि फर्केर आइदेवास भने आस हरदम आइरहन्छ। आखिर सास अदृश्य नछ माया त यहि कुहिएर जाने शरीर कैत हो।
यी प्रतिनिधि घटना हुन्। घटना यस्तै हुन्। यो भन्दा परअरु घटना छैनन् तर समस्या यी दुई पात्रमा मात्र सिमित छैन।शारीरिक अंगभंगको नाजुक व्यथा किन कोट्याउनु खाटा बसेको छ। चलायो भने फेरि बिषाउछ। हामीमा जस्तोसुकै घटना घटोस् दुख्न छोडी सक्यो।दुख्ने ठाउँ भएपो दुख्छ। दुख देख्दिने कोहि भएपो दुख्यो भन्नु। अहिले देशमा बिषाधीले भरिएका तरकारी र फलफूल छिमेक बाट भित्र्याइदै छ। यसको असर हामी जस्ता मजदुरलाईनै थुप्रीने हो। ए सरकार ! हामीलाई स्वादेशमानै गरि खाने बाताबरण बना हामी तलाई पनि अर्गानिक र ताजा फलफूल खुहाउछौँ । आफू स्वास्थ बन्छौ, तलाई पनि स्वस्थ बनाउछौं।
भोजराज घोडासैनी सुर्खेत हाल दक्षिण कोरिया